१२ जना अनाथ बालबालिकाको पिता हुन्, कलाकार ‘इकु’ ! फिल्म र सिरियलबाट कमाएको पैसाले अनाथ बच्चाहरु पाल्छन् (भिडियो हेर्नुस) – दैनिक नेपाल न्युज
१२ जना अनाथ बालबालिकाको पिता हुन्, कलाकार ‘इकु’ ! फिल्म र सिरियलबाट कमाएको पैसाले अनाथ बच्चाहरु पाल्छन् (भिडियो हेर्नुस)
प्रकाशित द्वारा: आइतवार, अशोज १२, २०७६
स्नेह आश्रम मुलपानीमा पुग्दा भाई बहिनीहरु मन लगाएर पढ्दै थिए । इकुलाई नै आफ्नो आमा अनि बुवा मान्ने साना नानी बाबुहरु यो घरमा खुशी छन् । हामी पुग्ने बित्तिकै उनीह्रुले हामीलाई आफ्नो प्रतिभा देखाए । गीत गाए अनि नाचेर देखाए । इकुको यो कामलाई हाम्रो पनि सम्मान । कलाकारिताबाट आएको पैसाले हालसम्म यि नानी बाबुहरुको रेख देख गरिरहेका छन् । बासस्थान, खाना, कपडा, शिक्षाका लागि इकु एक्लैले यो काम गर्न गाह्रो पनि भैरहेको उनले बताए । यदि सबै नेपालीको साथ र सहयोग भैदिए । नानी बाबुहरुले मिठो खान पाउंथे अनि राम्रो स्कुलमा पढ्न पाउंथे । इकु सबै मांझ सहयोगका लागि अनुरोध गर्दछन् ।
मुलपानीमा एउटा घरको माथिल्लो तल्ला भाडामा लिएर बिगत लामो समयदेखि स्नेह आश्रम संचालन गरिरहेका इकुलाई आफ्नै जग्गा र भवनमा अरु धेरै नानी बाबुहरुको भविष्य उज्यालो बनाउन मन छ । समस्या धेरै छन्, यि नानी बाबुहरुलाई राम्रो खुवाउन मन छ उनलाई, राम्रो शिक्षा दिक्षा दिन मन छ, राम्रो बिछौनामा सुताउन मन छ अनि राम्रो लुगा लगाईदिन मन छ । यसमा सबैको साथ भैदिए, पक्कै पनि धेरै अनाथ तथा असाहय बाल बालिकाले सुन्दर भविष्य पाउने थिए । यदि तपाईहरु पनि इकुको यो अभियानमा साथ दिन चाहनुहुन्छ भने स्नेह आश्रममा ९८४१५१५०८०, ९८२३६९९४४६ अथवा म शिशिर भण्डारीलाई ९८११००६९२९ मा फोन गर्नुस है । भिडियो हेर्नुस…
आमिर खानसँग जोडी बाँध्दै बलिउड चर्चित नायिका करिना कपुर !